I-china isitshixo esi-4 seqhosha elingenaqhosha elingenaqhosha lesitshixo esikude se-433mhz hitag i-AES 7953 chip yokuvuselela i-Clio III emva kwabavelisi abaphambili be-2013 kunye nabathengisi | UWilongda
Iqhosha eli-4 leSitshixo seMoto eSmart System 434mhz pcf7953 hitag AES chip ye Ukuvuselelwa kweqhosha lesi-4 izixhobo emva ko-2013
Imeko: 100% entsha
Iqhosha: amaqhosha ama-4
Eyona nto ingenanto: Ewe
Rhoqo: 433Mhz FSK
I-Chip: 4A Hitag AES-pcf7953M
IBhodi ye-Elektroniki: Ewe
I-7953 XTT chip;
phawu: ikhadi elingenaqhosha elingenaqhosha
into ekhethekileyo: emva kuka-2013 nge-7953 chip / hitag chip ye-AES
Inqaku lesi-2: ikhadi lokuphinda uvuselele iqhosha elingasetyenziswanga kude
Inqaku 3: Sebenzisa i-avdi ukuya kwinkqubo
inqaku 4: emva kwentengiso
Inqaku lesi-5: i-chip ngaphakathi yi-Hitag AES chip 7953XTT
KwiRenault Clio IV;
Ngo-2009-2015 weClio IV
Ikhadi lokuvuselela iKoleos clio
KwiRenault Clio IV Captur Passive Passive Keyless Go
Ikhadi eliPhambili leMoto kwiRenault Clio IV ,Isitshixo sokuvuselela iClio IIII,Isitshixo sokulawula esikude, Ukuvuselelwa kweqhosha lesi-4,Ukuvuselela i-aes hitag isitshixo
1. Kuya kufuneka uye kumthengisi wakho wasekhaya okanye kwivenkile yokutshixa ukusika isitshixo kunye nenkqubo yemoto yakho, iLockmith kufuneka ihlawulise ngaphantsi koMthengisi.
Nceda uqiniseke ukuba isitshixo sakho silingana nesethu, ukuba awuqinisekanga nceda uthumele ifoto yakho yoqobo kuthi ukuze uqinisekise, siya kukunceda ukuba uthenge isitshixo esifanelekileyo.
Sinikezela zonke iintlobo zezitshixo zemoto:
I-BMW / ye-Acura / ye-Alfa / ye-Audi / ye-Benz / ye-BMW ye-Buick / ye-Cadillac / ye-Chevrolet / ye-Holden / ye-Chrysler / ye-Citroen / ye-Ford / ye-Fiat / ye-GM / ye-Honda / ye-Hyundai / KWI-Kia / ILandrover / yeLexus / yeMazda / yeMaserati / yeMitsubishi / yeNissan / ye-opel / ye-peugeot / ye-Porsche / ye-Renault / ye-SAAB / ye-Subaru / ye-Suzuki / ye-Volvo / ye-Toyota / ye-Toyota VW
Bhalisa iakhawunti nge-imeyile yakho - Ngena ngaphakathi - Yongeza into ngobungakanani kwinqwelo-Thumela (jonga) - Khetha umthengisi
1.Sibonelela ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo zezitshixo zemoto, iitshipsi zeTransponder, iiNkqubo eziphambili, izixhobo zokutshixa, njl.
2.Nawuphi na umbuzo uza kuphendulwa zingaphelanga iiyure ezingama-24. Ukuba akukho mntu ukuphendulayo kwi-Intanethi nceda usishiyele umyalezo.
Into nganye iya kuvavanywa ngaphambi kokuba ithunyelwe kumthengi wethu, unokubeka iodolo yokuvavanya umgangatho wethu nawo.
4.Ukuba unenkxalabo okanye ukudideka malunga neemveliso zethu, nceda unxibelelane nathi, siya kwenza konke okusemandleni ethu ukukunceda.
Ndingalifumana njani ixabiso ngento yam enomdla?
A: Nceda ulandele amanyathelo angezantsi, uya kufumana ikoteyishini yethu.
Umbuzo wendlela yokwenza intlawulo?
A: Samkela i-Paypal / i-Western Union / i-TT, nceda usazise emva kokuba uhlawule, emva koko sinokulungiselela ipasile yakho ngexesha.
Q3.What malunga nexesha lakho lokuhambisa?
A: Ngokubanzi, zingaphelanga iintsuku eziyi-3 zomsebenzi emva kokufunyanwa kwentlawulo.
Q4.Ndingayalela ukuba isampulu ivavanye umgangatho kuqala?
A: Uku-odolwa kwesampula kuyabulelwa kakhulu. Ngokwesiqhelo sinokunikezela ngesampulu ukuba sinazo esitokhweni, kodwa umthengi kufuneka ahlawule iindleko zesampulu kunye neendleko zekhuriya.
Umbuzo: Ngaba ndingayitshintshisa imveliso xa ndifumene ukuba ayinakusebenza kwilizwe lethu?
A: Ewe, kodwa zonke izinto ezibuyiselweyo kufuneka zikwimeko yoqobo, kwaye iimfuno zabathengi zinoxanduva lwazo zonke iindleko zokubuya.
Sipakisha iimpahla zethu kwiibhokisi ezimdaka, zonke iimveliso ziya kupakishwa kakuhle ngaphambi kokuhambisa.
Siyinkampani yobungcali ethengisa ukuthengisa yonke into kunye nomzi-mveliso wethu ose China. Sinikezela nge
Iimveliso zeLocksmith ezifana nezixhobo zeLockmith, iiBlock Key, Fob Remote, Lock kunye nezixhobo ezizenzekelayo njl.
Inkonzo yabathengi kunye nokuma okuqinisekileyo kwekhredithi yimigaqo yethu kunye neNjongo yethu. Singathanda ukusebenzisana ne
abathengi kwiHlabathi liphela.
Egqithileyo I-2/3 Iqhosha elitshixwayo elikude ID48 chip 434mhz yeVW 1K0 959 753 N / 1J0 959 753 DJ / 1J0 959 753 N / 1J0 959 753 P / 1J0 959 753 AM / 1J0 959 753 DC / 1J0 959 753 T / 7M3959753F / 1J0 959 753 AG / 1J0 959 753 AH / 1J0 959 753 DA / 1K0 959 753 G / 1K0 959 753 Q Umbuzo:
Okulandelayo: Ukutshintshwa kweShell eyi-Smart Remote yeCar Key Case Cover yeVW VOLKSWAGEN CC Passat Magotan 3 Buttons
Ikhadi eliPhambili leMoto kwiRenault Clio IV
Isitshixo sokulawula esikude
Ukuvuselela i-aes hitag isitshixo
Ukuvuselelwa kweqhosha lesi-4
Isitshixo sokuvuselela iClio IIII
isixhobo sokutshixa i-Lishi HU100 (10) eyi-10-Sika ...
Amaqhosha amaqhosha amaNqwanqwa e-4 amaQhosha e-Chevrolet ABO1502T ...
Amaqhosha ama-3-Flip Remote Key Shell Case yePeugeo ...
3 Amaqhosha Remote Key Fob 315Mhz 433MHz 4D60 ID6 ...
2/3/4 amaqhosha Remote Key Shell Kuba Honda Accord ...
2/3/4 Amaqhosha Ekude Car Key Cover Shell Case F ...